Sida loo calaameeyo wada sheekaysiga sida looga akhriyo WhatsApp | Androidsis
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Tababarada, Whatsapp
WhatsApp waa codsi farriin heer sare ah oo ka mid ah dadka isticmaala Android. Waa wax iska caadi ah inaan yeelano doodo badan, mararka qaarkoodna kooxo. Noocyada wada hadalka noocan ah fariimo badan ayaa la diraa. Waxaana laga yaabaa inay jiraan waqtiyo aannaan halkaa joogin ka dibna aan la kulanno tiro badan oo ogeysiisyo ah. Marka ma dareemeyno inay tahay inaan wax walba aqrino ama aan wadahadalka galno si astaamaha ogeysiiska ay u baaba'do.
Waxa aan ku sameyn karno kiiskan noocan ah waa in lagu calaamadeeyo wada hadalka la yiri sida loo akhriyey. Sidan oo kale, WhatsApp ayaa joojin doonta inay na tusto tirada farriimaha ee aynaan weli aqrin. Tani waa wax runtii sahlan in la gaaro. Waxaan ku tusaynaa tillaabooyinka hoose.
Marka hore waxaan galnaa WhatsApp oo waxaan xulnaa wadahadalka na xiisaynaya, kaas oo aan ku hayno ogeysiisyo badan. Waa inaan hoos u qabo illaa xulashooyinka soo baxa ay muuqdaan. Marka xigta, waa inaan gujino badhanka menu-ka (saddex dhibcood oo sare oo toosan).
Adoo gujinaya badhan, Waxaan heli doonaa fursado dhowr ah, oo mid ka mid ah uu yahay "calaamadee sida akhrinta". Sidaa darteed, waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno kiiskan waa guji xulashadaas. Marka codsigu wuxuu tixgelin doonaa inaan aqrinay dhammaan farriimaha sugaya wada hadalka la yiri.
Haddii aan haysannay farriimo badan oo aan sugeyno in aan akhrinno, lambarkaas ayaa ka baaba'aya shaashadda oo tilmaamaysa tirada farriimaha ee ay tahay in aan wali aqrinno. Oo sidaasaan ku hilmaami karnaa ogeysiisyadan ku soo baxa WhatsApp. Khiyaanadan runti waa mid ku qanacsan kiiska in aan ku jirno koox fariimo badan loo diro.
Laakiin waan isticmaali karnaa markasta oo aan rabno, maadaama aad sida muuqata, waa wax aad u fudud in la calaamadeeyo wada hadalka sida looga akhriyo WhatsApp. Marka haddii mar uun ay tahay inaad sameyso, wax dhibaato ah kuma lahaan doontid arrintan. By habka, ma rabtaa inaad aragto sida loo ogaado haddii lagaa dhagaystay WhatsApp?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo calaamadeeyo wadahadal ku saabsan WhatsApp sida loo akhriyo
Seefta xeeladeedu waxay la dagaallameysaa a 'Dil Bill' xilligii ugu wanaagsanaa ee Da'da Da'da Samurais